‘पूर्वयुवराज दीपेन्द्र भन्थे– सरकार नभन्नुस् सर, दीपेन्द्र नै भन्नुस् न’ ⋆ JINDAGANI.COM
Home » ‘पूर्वयुवराज दीपेन्द्र भन्थे– सरकार नभन्नुस् सर, दीपेन्द्र नै भन्नुस् न’
जेष्ठ १९, २०७८	1	By कला अनुरागी
जीवन आफैँमा संयोग नै त हो । जीवनलाई सात दशकतिर उकालिरहेका नारायणप्रसाद शर्मा, जसले जीवनका चार दशक कलिला नानीलाई शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्दै बिताए । त्यो बाटो हिँड्नु एउटा संयोग नै थियो, कुनै योजना थिएन ।
बिए पास गरेपछि डिग्री भर्ना भएर भूगोलमा मास्टर्स गर्ने योजनामा थिए उनी । तर, लामो समय बिरामी परेर भर्ना हुने अवधि पनि सकियो । त्यसपछि के गर्ने त एक वर्ष ? सोचे– गाउँमा गएर सेवा गर्छु । ‘त्यसबेला मेरो मावली गाउँमा नेपाल तारा हाई स्कुल भर्खर स्थापना भएको रहेछ । मलाई बोलाइयो । त्यहाँ शिक्षण सुरु गरेँ ०३० सालमा,’ उनले सम्झे । भर्खर सुरु गरेको विद्यालय, बिए पास गरेको मान्छे । सबै विषय पढाउनु पनि पर्ने । पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना कम भएको बेला । चेतना जगाउन दौडिनुपर्ने । विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि चन्दा उठाउन पनि दौडनुपर्ने । गर्दागर्दै समय बित्दै गयो । दुई वर्षपछि त निमित्त प्रधानाध्यापक बने । त्यसैबिच उनले बिएड एजुकेसनल ट्रेनिङ्ग लिने मौका पाए । त्यो सकेर जिल्ला फर्किंदा भने राजनीतिक चलखेल भएछ । उनलाई अर्कै विद्यालयमा सरुवा गरिदिएछन् । झन्डै पाँच वर्ष काम गरिसकेको मान्छेलाई त्यस्तो गरेको उनलाई चित्त बुझेन । उनी भन्छन्, ‘मलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन । त्यसैले विवाद भयो । म बिएल गर्न काठमाडौं आएँ । ललितपुरको आदर्श विद्या मन्दिर, मानभवनमा ट्रान्सफर भएँ ।’ उनले त्यहाँ चार वर्ष बिताए । त्यसैबेला एमएड गरे । यसैबिच उनले टाइम्स अफ इन्डियामा विज्ञापन देखे– बूढानीलकण्ठ स्कुलमा सामाजिक शिक्षाको शिक्षक मागिएको । उनले पनि निवेदन हाले । संयोग, छानिए र सुरु भयो नेपालकै नमुना मानिएको विद्यालयमा शिक्षण यात्रा ।
‘बच्चाको सामीप्यता निकै आनन्ददायी हुन्छ । विशेषगरी उनीहरूको जिज्ञासा समाधान गर्दा खुब आनन्द आउँछ । उनीहरूको जीवनलाई नजिकबाट छुन पाएजस्तो लाग्छ । समाज र अभिभावकको आशालाई आकार दिन पाएजस्तो लाग्छ । यो नै शिक्षकको आनन्द हो ।’
डेढ वर्षपछि राजभण्डारीको काज फिर्ता भयो । विद्यालय सञ्चालन बोर्डले सहायक प्रधानाध्यापकमध्येबाट प्रधानाध्यापक छान्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो । मन्त्रालयले शर्मालाई छान्यो । त्यसपछि सुरु भयो शिक्षणका साथमा नेपालको उत्कृष्टमध्ये एक मानिने बूढानीलकण्ठ स्कुलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी । विभिन्न उतारचढावबिच उनले १७ वर्ष प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाले र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे ।
त्यतिमै सकिएन उनको शिक्षण यात्रा । सरकारले ०६९को बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको निजामती स्कुल सुरु गर्न धनकुटा पठायो । त्यहाँ पुगेर उनले नयाँ विद्यालय स्थापना गरे । चार दशक रफ्तारमा कुदेपछि फुर्सद लिएका हुन् उनले ।
उनलाई आफ्ना छोराछोरीको सफलताले जति खुसी दिन्छ, त्यति नै खुसी दिन्छ विद्यार्थीको सफलताले । त्यसो त विद्यार्थी पनि उनलाई उत्तिकै सम्मान गर्छन् । केही वर्ष अघि उनी छोरीको ‘ग्य्राजुएसन’ पूरा भएको सन्दर्भमा अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । त्यो कुरा उनका विद्यार्थीले थाहा पाएछन् र ‘गेट टुगेदर’ गरे । उनले पढाएका विद्यार्थी त्यहाँ विभिन्न पेसामा सफल भइरहेका रहेछन् । उनलाई त्यसले निकै गर्व अनुभूति भयो । खुसी पनि उत्तिकै बटुले ।
‘एकजना अभिभावक आएर भन्नुभयो– तपाईंहरूले हाम्रा बच्चालाई धान रोप्न लगाउनुभएछ । हामी हाम्रा बच्चा माटामा खेलिरहेका देख्न चाहन्नौँ । बरु तपाईंको विद्यालयलाई पैसा अपुग भएर विद्यार्थीलाई काम लगाइएको हो भने हामी सहयोग गर्छौं,’
त्यसो त उनले भोगेका छन्, सम्भ्रान्त भन्ने कति अभिभावक नै यस्तो व्यावहारिक ज्ञान र श्रमप्रतिको सम्मानप्रति उदासीन छन् । बूढानीलकण्ठमा हरेक वर्ष धान रोप्न लगिन्छ विद्यार्थीलाई । श्रमप्रतिको सम्मान पैदा होस् र त्यसको व्यावहारिक ज्ञान पनि प्राप्त होस् भनेर । ‘तर, एकजना अभिभावक आएर भन्नुभयो– तपाईंहरूले हाम्रा बच्चालाई धान रोप्न लगाउनुभएछ । हामी हाम्रा बच्चा माटामा खेलिरहेका देख्न चाहन्नौँ । बरु तपाईंको विद्यालयलाई पैसा अपुग भएर विद्यार्थीलाई काम लगाइएको हो भने हामी सहयोग गर्छौं,’ उनले सम्झे । उनले अगाडि भने, ‘उहाँलाई सम्झाउन निकै गाह्रो भयो । किनकि हामीले पैसाका लागि त्यसो गरेका होइनौँ । नेपालको व्यावहारिक विषयबारे विद्यार्थीमा ज्ञान दिनका लागि हो । यस्तो कुरा अभिभावकले नबुझ्दा विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञानप्रति उत्सुक हुँदैन । यसले उसलाई सफल बन्नबाट रोक्छ ।’ बूढानीलकण्ठको व्यावहारिक शिक्षण पद्धतिकै कारण त्यहाँको उत्पादन सफल रहेको उनको बुझाइ छ ।
‘त्यतिबेला आफ्नो विद्यार्थी भए पनि सरकार त भन्नुपर्‍यो नि । तर, उनले त्यसो नभन्नुस् सर, विद्यार्थीकै रूपमा दीपेन्द्र भन्नुस् न भन्थे । त्यो बूढानीलकण्ठ विद्यालयको स्कुलिङ थियो,’
मन्त्रीको नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘तर, मैले उहाँलाई चिठी लेखेर सकिँदैन भनेँ । पछि, हाम्रो विद्यालयले पुरस्कार पायो । त्यो पुरस्कार वितरण समारोहमा उनी पनि थिए । मैले नमस्कार गर्दा पनि फर्काएनन् ।’
शर्माजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौं बिताएका धेरै व्यक्तित्व छन् नेपालमा । उनीहरू सेवाअवधिपछि निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसैले एसएलसीमा प्रतिशत आएन, शिक्षाको गुणस्तर बढेन भनेर कोकोहोलो गर्नुको साटो त्यस्ता अनुभवी व्यक्तित्वको ज्ञानलाई प्रयोग गरी सही नीति तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सहमत छन् शर्मा । उनी भन्छन्, ‘सरकारले त्यसरी सोच्ने हो भने त राम्रो हो । हामीजस्तो जनशक्तिलाई धेरै खर्च पनि गर्नुपर्दैन । एउटा समूह बनाएर नियमित अन्तरक्रिया गराउने र नीति तय गर्ने हो भने लामो अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग हुन्छ । त्यसले राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्छ ।’ अनुभवबाट आफैँ विद्यालय बनिसकेका यस्ता व्यक्तित्वबाट राज्यले लिन सक्ने कुरा धेरै छन् ।
Tagsदरवार हत्याकाण्ड पूर्व युवराज दीपेन्द्र पूर्व राजकुमार निराजन पूर्व राजकुमारी श्रुति पूर्व राजा वीरेन्द्र बूढानीलकण्ठ स्कूल राजपरिवार
Narayan prasad Neupane says:
राज्यले यस्ता व्यक्तिबाट सहयोग लिन नै रुचाउदैन । यहाँ धारेहात लगाएर कुनै माइकालाल छ ? जस्ता शब्दहरु उच्चार गर्न रुचाउने नेताहरु त मन्त्री बन्दछन् ।